माता पाथिभराको दर्शन गर्दै ०७७ साल पुस २८ गते मंगलबारको राशिफल अनुसार तपाईको भाग्यफल हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > राशिफल > माता पाथिभराको दर्शन गर्दै ०७७ साल पुस २८ गते मंगलबारको राशिफल अनुसार तपाईको भाग्यफल हेर्नुस्
माता पाथिभराको दर्शन गर्दै ०७७ साल पुस २८ गते मंगलबारको राशिफल अनुसार तपाईको भाग्यफल हेर्नुस्
admin January 11, 2021 January 11, 2021 राशिफल	0
मिति २०७७ साल पुस २८ गते मंगलबार । भोलिको राशीफल यस प्रकार रहेको छ। तपाईहरूको रात दिन शुभ रहोस्।
मेष – दिन शुभ र भाग्योदयकारी सिद्ध होला । आरोग्यता र प्रशन्नता बढ्नेछ । सुख–शान्तिमा वृद्धि हुनेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । विलासमा पनि आकर्षण बढ्ला । मान पुरस्कार मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । विजयश्री प्राप्त होला ।
बृष – भागदौडमा वृद्धि हुनेछ । शारीरिक र आर्थिक कार्यमा प्रगति होला । विवाद आदिदेखि सचेत भइ अरुको भर नपरेर स्वविवेकले काम गर्नु हितकर रहला । खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ । व्यापारमा सफलता मिल्नेछ । सुख र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ ।
मिथुन – भागदौड व्यस्तता बढ्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा अँंट उत्साह बढ्नेछ । साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । जोखिममा नपर्नु बेस होला । सोचीविचारी काम गर्नुपर्ला । आशा उत्साह बढ्ला, नयाँ काममा सफलता मिल्नेछ ।
कर्कट – मान पुरस्कार मिल्नेछ । आय वृद्धि होला । कर्मयोगी रहनुहुनेछ । यश वर्चश्वमा वृद्धि हुनेछ । व्यवसायिक पक्षसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । साझेदारीको काम बन्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । आँट–उत्साह बढ्ला ।
वृश्चिक – आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखन–प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग प्राप्त होला । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । साथीभाइको साथ भेटिएला । मिठो भोजन मिल्नेछ ।
धनु – धर्मपथमा सफलता मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । मनोकुलको काममा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । शैक्षिक र बौद्धिक काम बन्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । धन मान महत्व बढ्ला । रसराग गीत–संगीतमा आकर्षण बढ्नेछ । सुख सन्तति बढ्नेछन् ।
कुम्भ – धन यश मान सुख समृद्धि बढ्नेछ ।सुखशान्ति मान महत्व बढ्नेछ । साझेदारीको काम बन्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । हांसविलासमा आकर्षण बढ्ला । आरोग्यता बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ ।मिठो भोजन मिल्नेछ । प्रेममा रूचि बढ्ला । भ्रमण पनि गर्नुहुने सम्भावना रहनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ ।
मीन – आय वृद्धि होला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । गौरवमा बढोत्तरी हुनेछ । लगानी उठ्नेछ । अन्नधन बढ्ला ।प्रयासरत काम बन्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । उच्चाधिकारीको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । आरोग्यता वृद्धि होला ।
कलेज जान घरबाट नि’स्किएकी यु’वती बाटोमा मृ’त भे’टिन !
३ करोड नेपालीलाई खुशीको खबर ! यसरी खारेज हुदैछ १९५० को नेपाल भारत सन्धि ! (भिडियो हेर्नुस्)
२०७७ साल पौष १६ गते बिहीबार, हेर्नुहोस् यहाँहरुको राशिफल अनुसारको भाग्य यस्तो छ!